♪ “Google Apps များကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနည်းများ” ♫ - Myanmar Spirit
Home / Knowledge / ♪ “Google Apps များကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနည်းများ” ♫
♪ “Google Apps များကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနည်းများ” ♫
10:07:00 pm Myanmar Spirit
Google ဖန်တီးထားတဲ့ Apps များဟာ Play Store မှာ အကောင်းဆုံးများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ Apps များကို သင်ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြု တတ်ရဲ့လား? သင့်ဖုန်းကို ဘယ်လောက်ပဲအသုံးပြုပြု၊ ဘယ်ကနေပဲဝယ်ဝယ် သေချာတာတစ်ခုက Google Apps များကို ထည့်သွင်းပေးထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သင့်ရဲ့ Android မှာ အရေးကြီးတဲ့နေရာကနေ ပါဝင်နေသလို အသုံးပြုသူများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ စွမ်းဆောင်ချက် များစွာ ပါရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ဟာ အသုံးပြုသူများ အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်း အတွေ့အကြုံကို ခံစားရစေဖို့ပုံမှန် Updates များ ဖြန့်ချိပေးနေပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်တို့ Devices များမှာ Gmail, Chrome, Photos တို့လို Apps များကို ထည့်သွင်းပေးထားပေမယ့်လည်း Android အတွက် Google က Apps ဘယ်လောက်များစွာကို တီထွင်ပေး ထားတယ်ဆိုတာကို သင်သိပါသလား? Play Store မှာရှာကြည့်ရင် Google Apps ပေါင်း ၅၀ ကျော်ရှိပြီး အများစုကို ကမ္ဘာအ၀န်းမှ Android Users သန်းပေါင်းများစွာက မသိကြပါဘူး။ အချို့ဆိုရင် Download အရေအတွက် ထောင်ဂဏန်းသာရှိ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ Apps များမှာ အသုံးဝင်တဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်များစွာ ရှိပါတယ်။
ဘယ်လို Android User မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် Google ရဲ့ Apps Suite များဟာ အလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေကို ကောင်းစွာအသုံးချတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ သင့်ဖုန်းမှာ အသုံးပြုဖို့ တကယ့်ကို လိုအပ်တဲ့ အဲဒီ Apps များရဲ့ အကောင်းစားစွမ်းဆောင်ချက်များကို ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီထဲက အများစုကို အသုံးပြုနေသူများတောင် သိအုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အခုဖော်ပြ မယ့် နည်းလမ်းများကိုလေ့လာရင်တော့ မကြာမီ မှာ အကျွမ်းဝင်လာမှာပါ။ နည်းလမ်းများကို ကျွမ်းကျင်စွာသုံးတတ်ပြီဆိုရင်တော့ Google Apps များ ဟာ ဘယ်လောက်အစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာသိလာမှာပါ။ အများစုအတွက် အခြား Third-Party Apps များကို တောင် အသုံးပြုဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ သင်အတွက် အသုံးဝင်မယ့် Google Apps များကိုသာ ရွေးချယ်ရမှာပါ။
<Chrome မှာ Site Permissions များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း>
<၀က်ဆိုက်များမှ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ Permissions များကို ဖယ်ရှားနည်း>
Chrome ဟာ အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဘရောက်စာတစ်ခုဖြစ်ပြီး Google က လည်း အမြဲတမ်းစွမ်းရည်မြင့် မားအောင် Update လုပ်ပေးနေပါတယ်။ Android ရဲ့ လုံခြုံရေးပြဿနာတစ်ခုကြောင့် Google က မကြာမီကပဲ Update တစ်ခုဖြင့်ဝက်ဆိုက်လုံခြုံရေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ် ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ စွမ်းဆောင်ချက် များထဲကတစ်ခုက ၀က်ဆိုက်များက တောင်းခံတဲ့ Permissions များကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး လိုအပ်ရင် Block လုပ် နိုင်ပါတယ်။ ရေရှည်မှာတော့ သင့် Device အတွက်ဝက်ဆိုက်များရဲ့ Permission အချို့ကို Block လုပ်တာဟာ အကျိုးကျေးဇူးရှိစေပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အခုချက်ချင်းပဲ လုပ်ဆောင်ဖို့ အကြံပေးပါတယ်။
1. Settings ကို ဖွင့်ပါ။
Chrome Home Page ကိုဖွင့်ပြီးနောက်ညာဘက်ထိပ်မှ Menu Icon ကိုနှိပ် ပါ။ အဲဒီကနေ အောက် ကိုဆင်းပြီး Settings Tab ထဲသွားပါ။
2. Sites စာရင်း
Chrome ရဲ့ မူလ Settings Page ဟာ အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အောက်ခြေနားမှ Site Settings Tab ကိုရှာဖွင့်ပါ။ ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ စကရင်မှာ ပြသထားတဲ့ ၀က်ဆိုက်စာရင်းမှသင်နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်ပါ။
3. Permissions များကို ကြည့်ပါ။
၀က်ဆိုက်တစ်ခုစီရဲ့ စာရင်းမှာအဲဒီဝက်ဆိုက်က လက်ရှိမှာရယူထားတဲ့ Permissions စာရင်းကဏ္ဍကို တွေ့ရမှာပါ။ အများစုကတော့ ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ Phone App နဲ့ Contact List ကို ရယူမယ့် Permission လိုမျိုး သင်မယုံကြည်ရတဲ့ အရာများကို မြင်နိုင်မှာပါ။
4. Block လုပ်ဖို့ ရွေးချယ်ပါ။
သင် Block လုပ်ချင်တဲ့ Permission တစ်ခုကို တွေ့ရင် စာရင်းကနေ အဲဒါကို ရွေးချယ်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ Block Option ကိုနှိပ်ပေးပါ။ စာရင်းမှာပြသထားတဲ့ အခြားဝက်ဆိုက်များနဲ့ Permissions များကိုလည်း ဒီနည်းအတိုင်း Block လုပ်နိုင်ပါတယ်။
<Google Apps များနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို တိုးချဲ့ပါ>
<သင် ဂိမ်းကစားတာကို ကမ္ဘာကို ပြသပါ>
Play Games မှ Record Option အသစ်ကိုရွေးချယ်ပြီး သင်ဂိမ်းကစားတာ ကို ကမ္ဘာကိုပြသပါ။ တိုက် ရိုက်ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်မယ့် Resolution ကိုလည်း ရွေးချယ်နိုင်ပါပြီ။ သင့်ရဲ့အင်တာနက်လိုင်းဟာ သိပ်မကောင်း ရင် 480p Video ကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
<Collections မှာ ပို့စ်များကို Pin လုပ်ပါ>
Google + ရဲ့ Collection စွမ်းဆောင်ချက်က သင့်ရဲ့ အနှစ်သက်ဆုံးပို့စ် များကို တစ်နေရာထဲမှာ စုစည်းထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းပို့စ်တစ်ခု ကို Pin လုပ်တဲ့အခါမှာ သင့်သူငယ်ချင်းများ နောက်တစ်ကြိမ် App ကိုဖွင့်ရင် မြင်တွေ့နိုင်ဖို့ Highlight လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
<သူငယ်ချင်းများနဲ့ Playlists များ မျှဝေပါ>
Play Music မှာသင်နှစ်သက်တဲ့သီချင်းများအတွက် Playlist တစ်ခုကို ဖန်တီးပြီးတာနဲ့သူ့ရဲ့ ညာဘက်မှ Menu Icon ကိုနှိပ်ပြီး Share Playlist ကိုရွေးပေးပါ။ အဲဒီကနေသူငယ်ချင်းများ Playlist ကို နားဆင်နိုင်ဖို့ အတွက် တိုက်ရိုက်လင့်ကို ဘယ်လိုပို့ရမလဲဆိုတာကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
<YouTube မှာ ဗီဒီယိုအသစ်များ တင်ရင် Notification ရယူပါ>
သင်နှစ်သက်တဲ့ YouTube Channels များထဲမှ တစ်ခုက ဗီဒီယို အသစ်တင်ရင် သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် Channel ကိုပဲ Subscribe လုပ်ထား လို့မရပါဘူး။ Subscriptions Menu မှ Notification Options ကိုလည်း Enable လုပ်ပေးရမှာပါ။
<Photos ရဲ့ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ တန်းပလိတ်များကို ပြင်ဆင်ပါ>
Photos App ရဲ့ Editing အစိတ်အပိုင်းဟာကောင်းမွန်ပြီး ကြိုတင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ တန်းပလိတ်များ ဟာလည်း များပြားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကြိုတင်သတ်မှတ်ထားမှုများကို ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး သင့်ဓါတ်ပုံကို ပိုမို ကောင်းမွန်စေမှာပါ။ Picture Icon နောက်မှာတွေ့ရတဲ့ ကြိုတင်သတ်မှတ် ထားတဲ့ တန်းပလိတ်များထဲမှ တစ်ခုကို မရွေးချယ်ခင် Photos မှ Editing Panel ကို ရွေးပါ။ ပြင်ဆင်ထားမှုများကို မသိမ်းခင်မှာ ဓါတ်ပုံမှ အရောင် အနေအထားကို ချိန်ညှိဖို့ Menu ရဲ့အောက်ခြေမှာဖွက်ထားတဲ့ Toolbar ကိုသုံးပါ။ ဒါဟာ ဓါတ်ပုံများစွာ ထဲမှသင့်ဓါတ်ပုံထူးခြားပြောင်မြောက်စေဖို့ အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ။ ကံမကောင်းတာက သင့်စိတ်ကြိုက် တန်းပလိတ် ကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ တန်းပလိတ်ထဲမှာ သိမ်းထားလို့ မရတာပါ။
<ဓါတ်ပုံရဲ့ နောက်ခံကို Blur လုပ်ပါ>
Google ရဲ့ Snapseed ဟာ သင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံများကို Edit လုပ်ဖို့အတွက် ဈေးကွက်ထဲရှိ အကောင်းဆုံး Apps များထဲမှ တစ်ခုပါ။ အထူးသဖြင့်တော့ အရာဝတ္ထုများကို Focus လုပ်ဖို့အတွက်ပါ။ Lens Blur Option ကို ရွေးချယ်ပြီး Focus လုပ်ချင်တဲ့ နေရာတစ်ဝိုက်ကို လက်နဲ့ဖိဆွဲပါ။
<Google Cardboard ကို ကောင်းမွန်စွာ ချိန်ညှိပါ>
သင့်ရဲ့ Headset ကိုဆက်သွယ်ဖို့ Cardboard App ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်မှာ ကောင်းမွန်စွာ ချိန်ညှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံတစ်ခုကိုဖွင့်ပါ။ Blur ဖြစ်နေ တာကိုတွေ့ရင် ဒါဟာကောင်းမွန်စွာ မချိန်ညှိထားလို့ပါ။ သင့်ဖုန်းဟာ နေရာတကျဖြစ်တဲ့တိုင်အောင် မတူညီတဲ့ဓါတ်ပုံများကို စမ်းသပ်ဖို့ App ကို အသုံးပြုပါ။
<ကောင်းမွန်တဲ့ Photo Sphere ကို ရိုက်ကူးပါ>
အခြား ကင်မရာ Apps များနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် Google Camera က အခြေခံ အမျိုးအစားပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ့မှာ အသုံးပြုသူများ သဘောကျစေမယ့် အကောင်းဆုံး Photo Sphere Modes များထဲမှ တစ်ခုပါရှိပါတယ်။ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးစရာမလိုဘဲ ဓါတ်ပုံတစ်ခုထဲမှာပဲ ၃၆၀ ဒီဂရီ Landscape ပုံရိပ်များ ကို ဖမ်းယူနိုင်မှာပါ။
1. ဘယ်ဘက်ထောင့်စွန်းကို အရင်ချိန်ပါ။
သင်ဖမ်းယူမယ့် Landscape ရဲ့ ဘယ်ဘက်ထောင့်စွန်းကို အရင်ဆုံးချိန်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ စကရင်ရဲ့ ဘယ်ဘက် ထိပ်မှ Menu Icon ကို နှိပ်ပြီး Photo Sphere ကို ရွေးပါ။
2. ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ငြိမ်ငြိမ်ရွှေ့ပါ။
ပြည့်စုံတဲ့ Photo Sphere တစ်ခု ဖြစ်ဖို့ အဓိက သော့ချက်က တတ်နိုင် သလောက် တည့်တည့်မတ်မတ် ကိုင်တွယ်ရမှာဖြစ်သလို စဉ်ဆက်မပြတ် ရွှေ့လျားရမှာပါ။ ရိုက်ကူးမှုပြီးရင်တော့ အမှန်ခြစ်အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ပါ။
3. ရလဒ်ကို လေ့လာပါ။
App က သင်ရိုက်ထားတဲ့ Photo Sphere ကို စတင်ဖန်တီးနေပါပြီ။ မိနစ် အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်မှာ ရလဒ်ကို ပြသပေးမှာပါ။ အနီးကပ်ကြည့်ဖို့ အတွက် Photos App ကို အသုံးပြုပါ။
<Google Earth မှာ Wikipedia သတင်းအချက်အလက်များကို ကြည့်ပါ>
Google Earth App ရဲ့ အကောင်းဆုံး စွမ်းရည်တစ်ခုက သင့်အနီးအနား သို့မဟုတ် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ တည်နေရာများကို လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်တာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီထက်ကောင်းတဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်များပါရှိပါတယ်။ Earth မှာ တည်နေရာ အသစ်များကို ပိုမိုအဆင်ပြေစွာရှာနိုင်ဖို့ Wikipedia ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ App ရဲ့ဘေးဘက် Menu ကနေ Wikipedia Option ကို Enable လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် မြေပုံပေါ်မှာ W Icons ပေါ်လာမှာပါ။ အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ရင် အဲဒီနေရာရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက် များကို Wikipedia မှ ရယူ ပြသပေးမှာပါ။ TripAdvisor, Yelp တို့မလိုဘဲ နေရာတစ်ခုရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိနိုင်တဲ့အတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။
<ယာဉ်လမ်းကြော Update သတင်းများကို ကြည့်ပါ>
Google Maps မှာခရီးတစ်ခုကို စီစဉ်ရတာလွယ်ကူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယာဉ်လမ်းကြော အခြေအနေ များကိုအသေးစိတ်သိနိုင်ရင် ပိုမိုအဆင်ပြေ မှာပါ။ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်တဲ့နေရာမှာ Stop Sign ကို ပြသပေးထား ပါတယ်။ အဲဒါကိုနှိပ်ရင် ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာအကျဉ်းချုပ်ပြသပေးမှာပါ။ ရှောင်ရှားသင့်တဲ့လမ်းများကို ပြသ ပေးတဲ့အတွက် ခရီးတစ်ခုသွားတဲ့အခါမှာ ဒါဟာမရှိမဖြစ် အရေးပါပါတယ်။
<My Tracks ဖြင့် ကြံ့ခိုင်စွာနေထိုင်ပါ>
Google ရဲ့လူသိနည်းတဲ့ Apps များထဲမှ တစ်ခုကမရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေး Tool ပါ။ တက်ကြွ ကြံ့ခိုင်တဲ့လူနေမှုဘ၀များအတွက် My Tracks ဟာ ဈေးကွက်ထဲမှာတော့ အကောင်းဆုံး ကိုယ်လက်ကြံ့ ခိုင်ရေး Tools များထဲမှ တစ်ခုပါ။ သင့်ရဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကိုတိုင်းတာဖို့ လိုအပ်တဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်များစွာ ပါရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Maps နဲ့ချိတ်ဆက် ထားတဲ့အတွက် သင်လမ်းလျှောက် ၊ ပြေးတဲ့အကွာအဝေးနဲ့ ကြာမြင့်ချိန်ကို မြေပုံမှာ ပြသပေးထားပါတယ်။
<သင့် Device ကို အသွင်ပြောင်းပါ>
<ဖုန်းမှ မီဒီယာများကို တီဗီသို့ ထုတ်လွှင့်ပါ>
Chromecast အသစ်ကို Google က မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး သင့်ဖုန်းမှ မီဒီယာ များကို တီဗီသို့ထုတ် လွှင့်ရာမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်လာပါတယ်။ တစ်နည်းအား ဖြင့် Chromecast ဟာ သင့်ရဲ့သာမန်တီဗီကို စမတ်တီဗီ အဖြစ် ပြောင်းလဲ ပေးပါတယ်။ Chromecast ကို ထောက်ပံ့တဲ့ App ကနေ Cast Icon ကို နှိပ်ပြီး ဖုန်းမှ မီဒီယာ များကို တီဗီသို့ ထုတ်လွှင့်ပါ။
<Skype အစား Hangouts ကို သုံးပါ>
Google Hangouts ဟာ Skype လောက် နာမည်မကြီးပေမယ့် အစွမ်းထက် ပါတယ်။ Video Call ပြုလုပ်နေစဉ်မှာ Plus Icon ကိုနှိပ်ပြီး Group Video Call လုပ်နိုင်ပါတယ်။ နှစ်သက်သလောက် သူငယ်ချင်းများစွာ ထည့်သွင်း နိုင်ပါတယ်။
<Kindle အစား Play Books ကို သုံးပါ>
Play Books App မှာ စာဖတ်နေစဉ် ထိပ်မှ A Button ကို နှိပ်ပါ။ Drop-Down Menu ကနေ Kindle နဲ့ ဆင်တူအောင် Background, Font, Size တို့ကို ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
Google Fit ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများထဲမှ တစ်ခုက Fitness Trackers များစွာနဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အချိန်အတော်ကြာအသုံးပြုပြီးရင်တော့ သင့်ရဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းများကိုလုံခြုံစေဖို့အတွက် Google Drive မှာ Backup လုပ်ထားပါ။
Android Pay ဟာ ၂၀၁၆ အတွက်သတင်းထူးပါ။ သင့်ဖုန်းမှာ App ကို Setup လုပ်ပြီးရင် အရောင်း ဆိုင်များမှာ လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ ငွေပေးချေ နိုင်မှာပါ။ ပြေစာများကို အီးမေးကနေ သင့်ထံပေးပို့မှာပါ။
<Google Keep Lists များကို အခြားလူများနဲ့ မျှဝေပါ>
လျှိ့ဝှက်ချက်များရှိတဲ့ နောက်ထပ် App တစ်ခုက Keep ပါ။ Evernote နဲ့ ဆင်တူပေမယ့် Keep မှာ အထင်ကြီးစရာစွမ်းရည်များပါတဲ့အတွက် အသုံးပြု သူများပြားပါတယ်။ အဓိကကတော့ စာရင်းပြုစုတဲ့ App ဖြစ်ပေမယ့် ဆန်းပြားတဲ့ List များတောင် ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ List တစ်ခုကို နှစ်ယောက် ဖန်တီးပြီးရင် ထိပ်မှ People Icon ကိုနှိပ်ပါ။ အဲဒီကနေ အဲဒီစာရင်းကို ပူးပေါင်းပြုလုပ်ဖို့ အခြားလူများကို ဖိတ်ခေါ်နိုင်သလို ကြည့်ရှုဖို့လည်း ဖိတ်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ အပတ်စဉ် အလုပ်ကိစ္စများကို စီမံခန့်ခွဲဖို့ ကလင်ဒါက အလွန်ကောင်း တဲ့ App တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် အခုအချိန်မတိုင်မီတော့ သင့်ရဲ့နေ့စဉ်လူမှုဘ၀ကို စောင့်ကြည့်ဖို့တော့ လိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ Reminder စနစ်အသစ်ကို ထည့်သွင်းပေးလိုက်တဲ့အတွက် တစ်ပတ်အတွင်းလုပ်စရာ အလုပ်များကို နေ့စဉ် အသိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Reminder မှာ နှစ်သက် သလောက် အသေးစိတ်များကို မှတ်သားနိုင်ပြီး အခြား Maps , Contacts, Gmail တို့လို အခြား Google Apps များနဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
<ရုံးမှာ မရှိကြောင်း အလိုအလျှောက် စာပြန်နည်း>
ရုံးကနေအပြင်ခဏထွက်နေတဲ့ အချိန်ဒါမှမဟုတ် အားလပ်ရက်ခရီးထွက်လို့ ဖုန်းကိုအိမ်မှာ ထားခဲ့ ချိန်မှာ အီးမေးတွေ စုံပြုံဝင်လာတာလောက် စိတ်ညစ် စရာမရှိပါဘူး။ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အီးမေးတွေက အများဆုံးဖြစ် နေမှာပါ။ အဲဒီအတွက် ရုံးသို့မဟုတ် အိမ်မှာမရှိကြောင်း အလိုအလျှောက် စာပြန်တဲ့ စွမ်းဆောင် ချက်က အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။ ပြုလုပ်နည်းကို အောက်မှာဖတ်ပါ။
၁။ Inbox ကိုဖွင့်ပါ။
App ကိုဖွင့်ပြီး သင့်ရဲ့ အကောင့်ကို ရွေးပါ။ Inbox ထဲမှာ သင့်ထံဝင်ထားတဲ့ အီးမေးများကို မြင်ရမှာပါ။
၂။ Settings Menu
နောက်အဆင့်မှာ Settings Menu ကို ရှာရမှာပါ။ ဘယ်ဘက်အပေါ်ထိပ်မှ Menu ကို နှိပ်ပြီး အောက်ခြေမှ Settings ထဲသွားပါ။
၃။ Out of Office ကို ရှာပါ။
General Settings Tab ထဲသွားပါ။ အောက်ကိုဆင်းပြီး Out of Office ကို ရှာပါ။
၄။ နေ့ရက် ထည့်ပါ။
သင် ရုံးမှာ မရှိမယ့် အချိန်ကာလရဲ့ ပထမဆုံးရက်နဲ့ နောက်ဆုံးရက်ကို ထည့်ပေးပါ။
၅။ အသေးစိတ်ကို ထည့်သွင်းပါ။
ရုံးမှာမရှိကြောင်း စာပြန်တဲ့အီးမေးအတွက် ခေါင်းစီးနဲ့ကိုယ်ထည်စာသားကို ရေးသားပေးပါ။ ဆက်သွယ်စေချင် တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ရှိရင်လည်း ထည့်ပေးပါ။
၆။ စာပြန်ရမယ့် Contacts များကို ရွေးချယ်ပါ။
သင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ Contacts များက သင့်ထံ အီးမေးပို့မှသာ အလို အလျှောက် စာပြန်အောင် သတ်မှတ် ထားနိုင်ပါတယ်။ အောက်ခြေမှ Check Box မှာ အမှန်ခြစ်ပါ။
<Gesture Typing ကို ကျင်လယ်စွာသုံးပါ။>
Gesture Typing လို့ခေါ်တဲ့ကီးဘုတ်ကိုပွတ်ဆွဲပြီးစာရိုက်ရတာမလွယ်ကူ ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အနည်း ငယ်လေ့ကျင့်ပြီးရင်တော့အိုကေပါပြီ။ ကီးဘုတ် ရဲ့ထောင့်တစ်နေရာမှ အခြားနေရာသို့ လက်ချောင်းထိပ်လေးနဲ့ အသာလေး ဖိဆွဲပွတ်ပေးပါ။ စကားလုံးတစ်ခုအတွက် မလိုအပ်တဲ့အက္ခရာများကို မထိမိ အောင်သတိပြုပါ။ Google Keyboard ရဲ့ ကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ချက် များထဲမှ တစ်ခုမှာ စာလုံးအမှားများကို အလိုအလျှောက် ပြုပြင်ပေးခြင်း အပြင်မှားနေသေးရင်လည်း သင်နှစ်သက်တဲ့ Dictionary ထဲထည့်သွင်းဖို့ စကားလုံးကို ဖိထား နိုင်ပါတယ်။
<Inbox မှာ Trip Bundle ကို ဖန်တီးပါ>
သင်ဟာ ခရီးသွားဖို့စီစဉ်နေရင် Inbox App မှာသင်နှစ်သက်တဲ့ဓါတ်ပုံများ၊ လေယာဉ်ခရီးစဉ် အသေးစိတ်များကနေ ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အီးမေးများ အထိအရာအားလုံးကို သ်ိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ် အားလုံးကို တစ်နေရာထဲမှာ သ်ိမ်းထားပြီးတာနဲ့ နှစ်သက်ရာ Contact ထံ ပေးပိုိ့ဖို့ Share Button ကိုနှိပ်ပါ။ Triip Bundle စွမ်းဆောင်ချက်ကို Inbox App ရဲ့ Home Page မှ ဘေးဘက် Menu ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
<Google Now Cards ကို Customize လုပ်ပါ>
Google Now ဟာဈေးကွက်ထဲမှာတော့ အကောင်းဆုံးကိုယ်ရေး လက်ထောက် Apps များထဲမှ တစ်ခု ပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့လူသုံးအများဆုံး အချက်က Customize ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းပါ။ Menu ထဲမှာ Default သတ်မှတ် ထားတဲ့ ကဒ်ပေါင်းများစွာရှိပေမယ့် သင်မနှစ်သက်တာတွေလည်း ပါမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း Google Now မှာ ကဒ်ပေါင်းများစွာကို စဉ်ဆက်မပြတ် ထည့်သွင်းပေးနေတဲ့အတွက် သင်နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး Google Now အတွေ့အကြုံကို ရရှိစေဖို့ အောက်ပါနည်းလမ်း ကို သုံးပါ။
၁။ Google Now ကိုဖွင့်ပါ
App Drawer ထဲသွားပြီး Google Now ကိုဖွင့်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် “ OK Google “ လို့ ပြောလိုက်ပါ။
၂။ Customize လုပ်ပါ
ကဒ်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ Menu Icon ကို နှိပ်ပြီး Customize Option ကို ရွေးပါ။ အဲဒီကနေ သင် ထည့်ချင် ၊ ဖြုတ်ချင်တဲ့ ကဒ်များကို ရွေးချယ်ပါ။
၃။ အသေးစိတ် ထည့်သွင်းပါ
ကဒ်တစ်ခုချင်းစီကို Customize လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကတော့ ကွဲပြားပါတယ်။ သင်နှစ်သက်တဲ့ ကဒ်များကို ရွေးချယ်ဖို့အတွက် စကရင် တစ်ခုစီမှ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။
၄။ Updates များကို စစ်ဆေးပါ
Now Home Page ကို ရောက်တဲ့အခါမှာ Menu က အလိုအလျှောက် Update လုပ်ပေးနေတာကို တွေ့ရမှာပါ။ သင် ရွေးချယ်ထားတဲ့ကဒ်များ အားလုံးကို အဲဒီမှာ ပြသပေးထားပါတယ်။
Google က ဖျော်ဖြေရေး Apps များသာမကဘဲ သင့်အလုပ်ကိစ္စများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်စေမယ့် ထုတ်ကုန်စွမ်းအား မြင့်မားစေတဲ့ Apps များကို ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။
သင် အဓိပ္ပါယ်သိချင်တဲ့ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားတစ်ခုကို Translate App မှာ ရိုက်ထည့်ဖို့ ခက်ခဲနေရင် App ထဲကနေ အဲဒီစာသားကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် အဲဒီပုံမှာပါတဲ့စာသားကိုသင့်ရဲ့ မိခင်ဘာသာစကားအဖြစ် App က ဘာသာပြန်ပေးမှာပါ။ ပိုမိုကောင်းတဲ့ရလဒ်ရဖို့ ကင်မရာကို တတ်နိုင် သလောက် ငြိမ်အောင်ကိုင်ပါ။
<တိကျတဲ့ ၀က်ဆိုက် သတင်းအချက်အလက်များကို ဖန်တီးပါ>
ခြောက်လလောက် Google Analytics မှာ ၀က်ဆိုက်ကို ခြေရာခံပြီး နောက်မှာ သင့်ဝက်ဆိုက်ကို လည်ပတ်တဲ့ သတင်းအချက်အလက် အသေးစိတ်ကိုသိဖို့အတွက် My Reports ကဏ္ဍကို သုံးပါ။ Menu ကနေ သင့်ဝက်ဆိုက်ကို လူလည်အများဆုံး အချိန်နဲ့ အလည်အလာဆုံး နိုင်ငံများကို သိနိုင်ပါတယ်။
<Google Drive မှာ ပူးပေါင်း အလုပ်လုပ်ပါ>
Google Drive မှာ Encryption လုပ်ထားတဲ့အတွက် အလုံခြုံဆုံး Cloud ၀န်ဆောင်မှုများထဲမှ တစ်ခုပါ။ သူ့မှာအလုပ်က်ိစ္စများကိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် များနဲ့အတူတကွပြုလုပ်နိုင်တဲ့စနစ်လည်းပါရှိပါတယ်။ Document တစ်ခုကို အတူတကွ ဖန်တီးပြီးရင် ညာဘက်မှ l Icon ကို ရွေးပေးပါ။ အဲဒီကနေ Add People ကို ရှာပါ။ သင် အလုပ်အတူလုပ်ချင်တဲ့လူရဲ့အီးမေးကိုထည့်သွင်း ပေးနိုင်သလို Message ပေးပို့ခြင်းဖြင့် ဖိုင်အတွက် Passpord ကို ပေးပို့ နိုင်ပါတယ်။
<ဖုန်းကနေ ဒတ်စတော့ကို ထိန်းချုပ်တဲ့အခါမှာ ချိန်ညှိပါ>
Remote Desktop ဖြင့် ကွန်ပြူတာကို Android Device ကနေ ဆက်သွယ် တဲ့အခါမှာ ဖုန်းမှာပေါ်တဲ့ ပုံရိပ်များဟာေ၀၀ါးနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကို ပြုပြင်ဖို့ App ရဲ့ ဘယ်ဘက်ထိပ်မှ Menu Icon ကို နှိပ်ပြီး Shrink to Fit ကို ရွေးပေးပါ။ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသင့်ဖုန်းမှ ဒတ်စတော့မြင်ကွင်းဟာ ကျုံ့သွားပြီး အဆင်ပြေစွာ မြင်ရမှာပါ။
<Docs မှာ အကြောင်းအရာများကို ရှာဖွေပါ>
Google Docs မှ Research Tool အသစ်ကနေ ၀က်ဆိုက်များ၊ Wikipedia မှ ဒေတာများကို သင်ဖန် တီးထားတဲ့ Documents ထဲ ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ အလားတူပဲ Research Tool ဖွင့်ထားစဉ်မှာ Insert Button ကို နှိပ်ပြီး ဓါတ်ပုံများ ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ Documents ကို လူတစ်ယောက်ထံ ပေးပို့ရင် အဲဒါနဲ့အတူ သင်ထည့်ထားတဲ့ အကြောင်းအရာများ ပါဝင်သွား မှာပါ။
သင် အလုပ်လုပ်နေစဉ်မှာ Documents မှာ ပါတဲ့ စာသားများကို သိချင်ရင် Text to Speech App ကို အသုံးပြုပါ။ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာပြီးရင် App က Document မှာ ပါတဲ့စာသားများကို အစကနေ အဆုံး အသံထွက် ဖတ်ပြမှာပါ။
<Charts များထည့်သွင်းဖို့ Sheets ကို သုံးပါ>
Sheets မှာ ထည့်သွင်းတဲ့ ဒေတာအမျိုးအစားအပေါ်မူတည်ပြီး Google က သင့် Document မှာ ထည့်သွင်းဖို့ရုပ်ပုံကားချက်များကိုအကြံပြုမှာပါ။ သူအကြံပေးတာကို လိုက်နာစရာမလိုပေမယ့် နံပါတ်များစွာ ပါတဲ့ Worksheet များအတွက် အကောင်းဆုံးကို ပံ့ပိုးပေးပါတယ်။
Cloud Print ဟာ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ ပရင်တာတိုင်းကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။ ပရင့်ထုတ်ရာမှာ အခက်တွေ့ နေရင်တော့အကောင်းဆုံးက Cloud Print ပါ။ App က ပရင်တာများကို လျင်မြန်စွာ ရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်။ အမှားများကိုလည်း ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါ တယ်။